सुटिङ सेटमा निर्देशक माथि सृष्टिको कर्के नजर ! « Ramailo छ
सुटिङ सेटमा निर्देशक माथि सृष्टिको कर्के नजर !
छायाँकन सुरु भएको केही दिनमै ‘बाँध मायाले’ को सेटबाट अनौठो प्रकारको तस्बिर बाहिरिएको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा निर्देशक सबिर श्रेष्ठ, नायक आर्यन अधिकारी र नायिका सृष्टि श्रेष्ठ छन् । तस्बिरमा सृष्टिको एक्सप्रेसन अचम्मको छ ।
तस्बिरमा सृष्टि निर्देशक र नायकको बिचमा छिन् । उनले निर्देशक श्रेष्ठलाई मुख बङग्याउँदै कर्के नजर लगाएकी छिन् । आर्यन र सविर भने क्यामेरा तिर फोकस छन् । जे होस्, सविर, आर्यन र सृष्टिको तस्बिर हेर्न लायकको छ । यो तस्बिरबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ‘बाँध मायाले’ को सुटिङ निकै रमाईलोसँग भैरहेको छ । ‘बाँध मायाले’ को छायाँकन गत सातादेखि नवलपरासीमा हुँदैछ । फिल्ममा आर्यन र सृष्टि मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।